Filtrer les éléments par date : mardi, 11 août 2020
Saron’ny Zandary nandritra ny savahao nataon’izy ireo tao Morafeno Fokontany Ambonara Kaominina Malaimbandy Distrika Mahabo ny 5 aogositra teo ny kitapo iray, basy poleta nisy bala tokana, basimborona roa sy fitaovana samihafa fikojakojana basy ary omby iray.
Toerana fiafenan’ny dahalo io Morafeno io. Nisy dahalo dimy tao tamin’io fotoana io, saingy vaky nandositra raha nahatazana ireo zandary tonga hisambotra azy ireo, ka tavela ireo fitaovam-piadiana ireo.
Teny an-dalana hamonjy fodiana ireto olona roa ireto, rehefa avy namonjy fetim-pianakaviana tao Sakoamasy, Kaominina Isoanala no nisy nitifitra tao anaty haizina ka maty tsy tra-drano.
Ny alahady 9 aogositra tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany hariva no niseho ny loza tao Antsonjomalinika, 6km miala ny renivohitry ny Kaominina Isoanala.
Mbola karohina ireo nahavanon-doza.
Nanolotra vola 5 tapitrisa dolara (19 miliara ariary) ny governemanta Amerikana, tamin’ny alalan’ny masoivoho Amerikana ho amin’ny fampandrosoana iraisam-pirenena, hanohanana ny fandaharan’asa fandefasana vola, izay hanampy ireo fianakaviana marefo eto Antananarivo Renivohitra hahafahan’izy ireo hanana sakafo ampy.
Ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo na ny PAM no mitantana sy mizara io fanampiana amerikana io, izay hamaly ny filana ara-tsakafon’ny olona miisa 323 000 eto amin’ny tananan’Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Moramanga, Taolagnaro ary Manakara.
Ny fianakaviana tsirairay dia hahazo vola 100 000Ariary isam-bolana mandritra ny roa volana.
“Maniry ny hanohana ara-tsakafo ireo fianakaviana marefo sy sahirana sy hanome tosika ireo orinasa eo an-toerana izahay”, hoy ny Masoivoho amerikana, Michael P. Pelletier.
Nahatratra olon-dratsy iray mitondra basy gasy ny Zandary nanao fisafoana tao Berary-Ambovombe ny alahady tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany alina.
Saika hanatanteraka fanafihana eto Ambovombe izy ity satria tsena, ary fanaon’ireto olon-dratsy ireto ny mifamorivory eto mialohan’ny tsena toy izao, saingy tratry ny velapandrika.
Notanana ao amin’ny brigady Ambovombe io olon-dratsy io anaovana fanadiadiana.
Voadona mafy tao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina coronavirus izao ny fizahantany ao Isalo. Mahatsiaro tena adino tanteraka ity faritra ity sy ireo mpisehatra ara-pizahantany ao an-toerana.
Nanapa-kevitra ny DRENETP Betsiboka fa miato avokoa ny fampianarana sy ny sekoly rehetra, na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, mandra-pisian'ny toromarika vaovao indray. Misy ny tenimita mamaritra izany.
Ny antony dia noho i Betsiboka isan’ireo Faritra mbola misonga ny valanaretina coronavirus, na tafiditra anatin'ny "Phase de croissance épidémique", araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alin’ny alahady 9 aogositra lasa teo.
Araka ny taratasy fampilazana ny talen'ny Orinasa serasera MBS, izay manana ny foiben-toerany etsy Anosipatrana, avy amin'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra, tamin'ny 30 jolay 2020, dia mandrava ny fifanarahana fampanofana maharitra (Bail emphytéotique), izay natao ny 08 aogositra 2000, fa misy ilany manokana ny trano.
Omeny 6 volana ireo mpanofa hiala amin'ny toerana.